Seranana Ivato: 109.300 euros tratra saika havoaka tsy ara-dalàna - ewa.mg
Seranana Ivato: 109.300 euros tratra saika havoaka tsy ara-dalàna
News - Seranana Ivato: 109.300 euros tratra saika havoaka tsy ara-dalàna
Manamafy ny fanaraha-maso sy fitsikilovana eny amin’ny seranam-piaramanidina ny mpiasan’ny fadintseranana. Ny 21 novambra teo, Malagasy efatra tratran’ny ladoany nitondra vola vahiny 109.300 euros, na 448.130.000 Ariary. Mpandeha iray, nahitana 19.000 euros ; iray hafa, nisy 49.850 euros ; iray namany, nitondra 20.000 euros ; ary ny iray farany, 20.450 euros. Voatazona izy efatra ireo izao ary mitohy ny fakana am-bavany azy ireo.
Tsy misy fanambarana na fahazoan-dalana mazava ny saika hamoahana ireo vola vahiny ireo ho any Nosy Maurice (zotra MK 289), rehefa nanontanian’ny mpanara-maso ao amin’ny ladoany izy ireo. Ny nasehon’izy ireo ny fahazoana mividy izany ihany, izay tsy ampy sy tsy manan-kery amin’ny fomba famoahana azy.
Manomboka ahitam-bokatra izao ny fanaraha-maso hentitra ataon’ny ladoany eo amin’ny seranana Ivato. Mila fahaiza-miasa anefa izany, ny fomba fiatrehana sy ny fanadihadiana ireo mpandeha mampiahiahy. Tsy maintsy mivonona amin’izany ny mpiasan’ny fadintseranana ary indrindra fandavana ny kolikoly. Ireo no miantoka ny fahatrarana ireny fanondranana an-tsokosoko ireny.
Nanamarika ny ao amin’ny ladoany fa maro ny vola ny vahiny avoaka tsy ara-dalàna amin’izao fotoana tsy maha mafy orina ny toekarena izao. Fanohitra iray farany ny fadintseranana miaro ny toekarena manerana ny sisin-tany rehetra, ka miantso ny Malagasy hifanome tanana hiady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. Tsy tokony eo Ivato ihany anefa izany fa manerana ny seranana rehetra, toy ny any amin’ireo seranan-tsambo “malalaka”, famoahan’ny sasany andramena, omby, sokatra, vatosoa…
L’article Seranana Ivato: 109.300 euros tratra saika havoaka tsy ara-dalàna a été récupéré chez Newsmada.
Fandikana fepetra ara-pahasalamana :: Olona telo amby fitopolo sy telonjato voasazy tao anatin’ny herinandro
Mbola maro ihany ireo sokajin’olona tsy manaja ny fepetra arapahasalamana amin’izao ady amin’ny valanaretina Covid-19 eto amin’ny faritra Analamanga izao. Nahatratra telo amby fitopolo sy telonjato ireo olona voasazy nampanaovina asa ho tombontsoan’ny daholobe teto an-drenivohitra, ny alatsinainy 6 jolay hatramin’ny alahady 12 jolay 2020. Iraika amby efapolo sy roanjato kosa ireo mpivarotra tsy nanaradalàna, araka ny tatitra avy amin’ny Polisim-pirenena. Nisy ihany koa ireo môtô nanao taingin-droa, ankoatra an’ireo mpamily sy mpamily mpanampy naiditra fonja kely. Teny amin’ny faritra sahanin’ny Kaomisarian’ny polisy, Boriboritany faharoa, eny Ambohijatovo sy ny Boriboritany fahefatra, eny Isotry, no nahitana ny ankamaroany tamin’ireo voasazy, satria ahatrarana olona enina amby telopolo sy dimy amby dimampolo. Olona roa kosa no nosakanan’ny polisy teny amin’iny faritra Analakely sy ny manodidina iny. Teny amin’ny faritra 67Ha sy ny manodidina, iandraiketan’ny Kaomisarian’ny polisy Boriboritany fahafito no nahitana mpivarotra betsaka indrindra rehefa tsy nanaraka ny lamina napetraka. Fiara enina, mpitondra entana sy vokatra, indray no sarona tamin’ny fikasana hitatitra olona an-tsokosoko hiditra teto an-drenivohitra, nandritra an’ireo fito andro ireo. Mitohy ny fanaraha-mason’ny mpitandro ny filaminana eto Analamanga momba ny fampanajàna an’ireo ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. L’article Fandikana fepetra ara-pahasalamana :: Olona telo amby fitopolo sy telonjato voasazy tao anatin’ny herinandro est apparu en premier sur AoRaha.
10 oktobra – 94 taona nahafatesan’i Samuel Ratany: Andrarezin’ny literatiora na tsy namoaka boky aza i Tanicus
Nasandratry ny gazety an-tsoratra, tamin’ny alalan’ireo sanganasany nivoaka matetika tao amin’ny Akon’Iarivo, Ny Mpanolotsaina, Sakaizan’ny tanora, ny Tsara hafatra, Ny mpandinika sns… Mbola tafiditra anaty fandaharam-pianarana koa ny sanganasan’i Tanicus. Nanjombona ny tany, nihazo ny kintana ilay sakaiza tsy foin-dRabearivelo, i Samuel Ratany, ny 10 oktobra 1926. Tsy voakosoky ny vanim-potoana ny fisian’izany lehilahy izany eo amin’ny sehatry literatiora malagasy. Tsy namoaka boky ho an’ny tenany manokana i Samuel Ratany, fa ireo niarahana tamin’ny namana sy ny tamin’ny gazety no nahatonga azy ho an­drarezina sy notetezin’ny va­nimpotoana ankehitriny. Ankoa­tra ny asasoratra, namolavola ny talentany ny fianarana nataony tao amin’ny sekoly Paul Mi­nault Ambohijatovo sy ny fa­nampian-dRandrianjafitrimo anadahin-dreniny azy. Ny filalaovana zavamaneno toy ny piano, nolovainy tamin’ny rainy, ary ny fitendrena harmonia sy ny fitsofana sodina no manavanana azy. Ny tononkalo sy ny sombintantara no tena nahafantarana an’i Tanicus. Teo koa ny lahatsoratra fanadihadiana toy ny “Tononkiran’ny Ntaolo”. Na­noratra tononkalo tamin’ny teny vahiny ihany koa izy, raha tsy hilaza afa-tsy ny “Elegie de minuit” sy ny In memorium”… Tanicus sy ny dindon’ny sorany Nanana olon-tiana nokasaina ho vady i Samuel Ratany, saingy tsy tanteraka izany noho ny fandraran’ny ray aman-drenin’izy ireo. Na izany aza, tojo an-dRasoazananoatra, nampakariny ho vady izy ny volana marsa 1926 ka nananany vavitokana nan­tsoina hoe Maria Rasoave­lomanana. Nanaloka azy ny fahafatesana, satria ny volana avrily 1926 izy no namoaka ilay tononkalo hoe “ Raozy sy vonimboasary”, izay nirakitra ny tsiambaratelon’ny fony. Ny volana aogositra, namoaka ilay tononkalo hoe “ Izay feoko eo am-pialana aina”. Ny volana septambra izy no nanomboka tsy salama ary nopaohin’ny fahafatesana, ny 10 oktobra . Anisan’ny mpanoratra nivelatra ara-tsaina sy ara-piarahamonina i Samuel Ratany. Nifandray be tamin’ireo mpanoratra maro toa an-dry J.J. Rabearivelo, Ny Havana, sns. 10 taona nilonana tao anaty asa soratra nefa voasokajy ho anisan’ireo andrarezina tsy lefy laza hatramin’izao i Samuel Ratany. Azo lazaina ho manana tarakevitra “Romantis­me” ny lehilahy raha ny asasorany no dinihina satria manana alahelo maningo-po tsy fanta-piaviana, mihirahira fahafatesana, nalofan’ny tsindrimandry matetika. Navoitrany ao amin’ilay tononkalony hoe “Embona” sy ny hoe “ Irery eo akaiky ny fasana”, sns, izany. Gazety sy ny boky “Kalokalo Tatsinanana” Amin’ireo asasorany marobe, toa manana tsindrimandry hafahafa i Samuel Ratany, ny dindon’ny fahafatesana, izay mihelohelo manaloka azy mazana. Ho fahatsiarovana an’i Samuel Ra­tany anefa, namoaka boky iray ireo sakaiza nifanerasera akaiky taminy, “Kalokalo Tatsinanana” , izay misy ny asasoratr’i Samuel Rata­ny anankiroa ny fiandohan’io boky io. Boky misy ny asasoratr’ireo mpanoratra maro toa an-dry JJ Rabearivelo, i Fredy Ra­jaofera, i Meteora, i Josephe Ra­­jaonah, i Elisa Freda, Rafa­noharana, i Jean Narivony, i Ro­dlish. Gazety maro nirakitra ny asasorany, tamin’izany fotoana izany, toy ny gazety Ta­na­ma­soandro, Ny Mpanolo­tsaina, Akon’Iarivo, Sakaizan’ny tanora, ny Tsara hafatra, Revue de Ma­dagascar. Teraka ny 16 jolay 1901, nindaosin’ny fahafatesana ny 10 oktobra 1926 i Samuel Ra­tany na i Tanicus , izany hoe teo amin’ny faha 25 taonany, ary na­levina ao Lazaina Avaradrano. Ny 3 jolay 1971 no nafindra tany Maharavo Vonizongo ny taolambalony.NarilalaL’article 10 oktobra – 94 taona nahafatesan’i Samuel Ratany: Andrarezin’ny literatiora na tsy namoaka boky aza i Tanicus a été récupéré chez Newsmada.
Tahitikely: tovolahy iray nofaohin’ny ranomasina
Mbola tsy hita popoka, hatramin’ny omaly hariva, ilay tovolahy iray 20 taona antsoina hoe Patrick, nofaohin’ny ranomasina teo amoron-dranomasina eny Tahitikely Toamasina. Fantatra fa tovolahy mipetraka eny Manjakaray izy ity ary tonga hiasa momba ny fikirakirana ny letisia amina orinasa iray ao Toamasina ka nanararaotra nilomano an-dranomasina raha izao lasan’ny rano ary tsy hita popoka izao. Raha ny fanazavana avy amin’ireo mpiara-miasa aminy, telo lahy izy ireo no niara-dia ary samy nanapa-kevitra fa hilomano, tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro teo ho eo. Raha mbola variana nanala akanjo ireo namany, i Patrick kosa, efa niroboka tao anaty rano. Tampoka teo anefa, feo tokana sisa heno sy ny tanany nitsangana toa miantso vonjy dia izay, tsy hita intsony fa natelin’ny ranomasina, araka ny fanazavan’ireo namany hatrany. “Hiasa letisia ny anton-dia aty Toamasina kanefa fahavoazana ny nanjo anay”, hoy hatrany ireo namany vonton’alahelo. Raha hiverenana, araka ny fanazavan’ireo mponina ao Toamasina, misy toerana tsy tia mpihavy, indrindra avy nandray zava-pisotro misy alikaola, ny ranomasina ary tsy ao Toamasina ihany fa betsaka mihitsy ny faritra tahaka izany ka mila mitandrina hatrany sy mifampiresaka amin’ny tompon-tanàna raha hilomano an-dranomasina, eny na ranomamy koa aza. Sajo sy J.C L’article Tahitikely: tovolahy iray nofaohin’ny ranomasina a été récupéré chez Newsmada.
Fahasalamam-bahoaka: misy voka-pikarohana tsotra nefa tsy ampiasaina
Voka-pikarohana mifandraika amin’ny fahazoana fitsaboana, ny kalitaon’ny tolotra omena. Ny famatsiana ny asam-pitsaboana no niompanan’ny fihaonana teo amin’ny mpitsabo mpikaroka, mpianatra ho mpitsabo sy ny mpanohana ara-bola sy teknika ny fahasalamana eto Madagasikara. Anisan’ny manome voka-pikarohana maro ny fakiolten’ny fianarana ho mpitsabo amin’ny faritany enina, ny Institut Pasteur de Madagascar ary ny INSPC Mahamasina izay misahana ny fahasalamam-bahoaka fa ny fanampariahana ireny voka-pikarohana ireny no tsy ampy, hoy ny minisitry ny Fahasalamana, profesora Rakotonirina Julio, omaly teny Ivato, nandritra ny Andro natokana ho an’ny fikarohana ho fanatsarana ny rafitra ho an’ny fahasalamana. Tokony hanome vahaolana sy torohevitra azo avadika ho politika hampiasaina hanatsara ny fahasalamam-bahoaka amin’ny ankapobeny ny fikarohana voatrandraka. Ireny voka-pikarohana ireny no mampandroso ny fahasalamana manomboka eny ifotony. Ohatra iray amin’izany ny voka-pikarohana « partogramme » entina hanaraha-maso ny fivoaran’ny toe-batan’ny vehivavy eo am-piterahana. Fomba tsotra amin’ny alalan’ny kisary hijerena ny fahasalaman’ny reny ( velaran’ny fisokafan’ny vozon’ny tranon-jaza) sy ny zaza izany, andraisana fanapahan-kevitra raha ilana fandidiana na fitsaboana hafa ilay mpiteraka. Betsaka ny toeram-pitsaboana tsy mampiasa izany akory nefa afaka mampihena ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza, hoy ny profesora Ranjalahy Justin, sady mpikaroka no mpampianatra.Ho an’ny fiarahamonim-pirenena kosa, tsapa fa mbola tsy laharam-pahamehana ho an’ny fanjakana malagasy ny fahasalamana sy ny sehatra hafa mifampiankina aminy (rano madio…). Mila mahatsapa koa ny mpiasan’ny fahasalamana fa ilaina amin’ny famonjena aina ary farany rehefa misy ny fanapahan-kevitra mikasika ny fahasalamana, tokony alaina daholo ny hevitry ny ankolafy rehetra voakasika, hoy ny sekretera jeneralin’ny CCOC, Radert Hony. Izay no mbola tsy hananantsika rafitry ny fahasalamana matanjaka, araka ny fahatsapan’ny fiarahamonim-pirenena ny zavamisy eny ifotony.Vonjy A. L’article Fahasalamam-bahoaka: misy voka-pikarohana tsotra nefa tsy ampiasaina a été récupéré chez Newsmada.
Hetsiky ny olom-boafidy eny fotony : « Tokony hohajaina ny safidin’ny tsirairay… »
« Tsy misy ny teritery », hoy ireo avy amin’ny Hetsiky ny olom-boafidy eny ifotony, raha nihaona amin’ny mpanao gazety tetsy Antanimena izy ireo. Nambaran’ny mpitarika, ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Mandrosoa, Andramasina, Andrianomenjanahary Laza, fa vonona hanatanteraka ny adidiny amin’ny fifidianana loholona izy ireo. Hitandro ny fihavanana sy hikatsaka ny soa iombonana sy ny fampandrosoana ho an’ny kaominina tsirairay misy azy ireo avy. « Hajaina ny safidy sy ny fanehoan-kevitry ny tsirairay ka miantso ireo vondron-kery rehetra hifanome tanana ho amin’ny fampandrosoana », hoy izy. Maherin’ny 70 ireo ben’ny Tanàna anatin’ity hetsika ity ary avy amin’ny antoko politika sy tsy miankina avy eto amin’ny faritanin’Antananarivo.Mbola nanentana ireo mpifidy lehibe namany: mpanolontsaina sy ben’ny Tanàna, izy ireo hanatevina izao hetsika izao. « Hanolo-tanana ny fanjakana sy hiray hina », hoy izy ireo.Synèse R. L’article Hetsiky ny olom-boafidy eny fotony : « Tokony hohajaina ny safidin’ny tsirairay… » a été récupéré chez Newsmada.
AmbondronA a présenté « Ho soa hatrany » à la presse hier. Bonne nouvelle pour les fans d’AmbondronA . Après de long mois voire deux années d’attente, le groupe a annoncé la sortie imminente de son septième album. « Ho soa hatrany », tel est l’intitulé de cet album collector qui sera disponible à partir de demain dans toute la Grande île, en streaming. Constitué de neuf titres dont « Aza ela any » et « Ny lalanao atao », l’opus porte toujours la signature bien marquée d’AmbondronA, tout en étant éclectique. Du pop rock certes, mais avec leur touche propre qui fait la particularité du groupe. Histoire de marquer le lancement, plusieurs dates sont prévues pour la rencontre avec les inconditionnels. La plus proche reste l’après-midi du samedi 28 novembre à l’Aero Village à Talatamaty. Au programme, showcase et séance de dédicace en entrée libre. Dans la soirée du 4 décembre, la bande se retrouvera dans le hall de la City Ivandry, toujours dans le cadre de la promotion de « Ho soa hatrany ». Pour le mois de décembre, AmbondronA investira l’Ifm Analakely les 11 et 13, pour enchainer ensuite au Santilo Anosizato les 18 et 19 décembre 2020. Évidemment, chaque rencontre se fera dans le total respect des gestes barrières. Il y a deux ans, Kix et ses compères ont travaillé d’arrache-pied sur cet opus en préparation de la célébration des 20 ans du groupe en 2021. Malheureusement, avec l’annulation du grand spectacle au Coliseum Antsonjombe au mois d’avril, pour cause de pandémie, la sortie de l’album a dû être reportée ce mois-ci. Etant donné que « Ho soa hatrany » a été « masterisé » en Europe, il a fallu attendre la réouverture des frontières pour son arrivée dans la Grande île. Pour rappel, AmbondronA a fait ses heures en sortant le tout premier album « ‘Lay tanàna » en 2002. En 2013, « Havaoziko », le sixième album est mis sur le marché. Depuis, la bande à Beranto enchaîne les singles tout en remplissant le Coliséum, enchaînant les tournées nationales et internationales. Beranto de mentionner que « nous n’avons plus envisagé de sortir des albums sur support étant donné qu’Il est temps de suivre le courant à l’ère du digital, toutefois, à la demande du public, nous avons décidé de faire de « Ho soa hatrany » un album collector en digipack. » Un cadeau d’avant noël qui fera plus d’un heureux parmi les inconditionnels, à pourvoir dans les telma shop dès demain. Zo Toniaina L’article « Ho soa hatrany » : Le nouveau cru d’AmbondronA est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article « Ho soa hatrany » : Le nouveau cru d’AmbondronA a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nampoina – No dose by Trano Bongo TanjombatoHafampana ny faran’ny herinandro … Hitondra mozika mahafinaritra i Nampoina, anio zoma 20 novambra, manomboka amin’ny 7 ora hariva, etsy amin’ny No Doze by Trano Bongo Tanjombato. Ao anatin’izany ny hira “acoustique” iarahan’i Nampoina amin’i Harty Andriambelo, izay manana ny mampiavaka azy ihany koa. “Seho maimaim-poana izy ity… Hanafana sy handrotsirotsy antsika eny am-pihinanana sy fisotroana ny tovovavy,” hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny No Dose.Lion Hill – Karibotel26 Analakely Asabotsy mahafinaritra … Mpanakanto manana ny maha izy azy indray ny hanafana ny After work, amin’ny alalan’ny “Show case” etsy amin’ny Karibotel26 Lounge Analakely, i Lion Hill miaraka amin’i Ambassadora -615. Seho hotanterahina rahampitso asabotsy 21 novambra, manomboka amin’ny 12 ora 30 antoandro. Hovelomina ao ireo hira nahafantarana azy sy ny maro hafa tsy ampoizina . Eo am-pisakafoana ny matsiro, hovazoina amin’izany ny “ Ambila”, “ Hanaraka ano ”… L’article TARATRY NY KANTO a été récupéré chez Newsmada.